‘दबंग ३’ को क्लाइमेक्स : ५ सय गुण्डासँग एक्लै भिड्दै सलमान - Experience Best News from Nepal
सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ केही दिनमै रिलिज हुँदैछ। जतिजति फिल्म रिलिजको तिथि नजिकिँदै छ, उति नै सलमानका समर्थकहरु उत्साहित बनिरहेका छ।
दबंग ३ मा सलमान फेरि एक पटक चुलबुल पाण्डे बनेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदैछन्। यो फिल्ममा कन्नड सुपरस्टार किच्चा सुदीपले खलनायकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सलमान र सुदीपबीचको क्याइमेक्स दृश्य हालसालै छायांकन गरिएको छ। क्लाइमेक्स दृश्यको विषयलाई लिएर विभिन्न समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन्।
हलै सुदीपले एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्, ‘दबंग ३ को क्लाइमेक्स पूरै २५ दिन लगाएर सुट गरिएको छ। फिल्ममा मेरो र सलमानको बीचमा लडाइँ देखाइएको छ। हामीबीचको लडाइँ अन्त्यसम्म थाहा नै हुँदैन, कि कसले जित्दैछ।’
उनले २४/२५ दिनको क्लाइमेक्स सुटिङमा २/३ दिन मात्र डाइलगबाजी गरिएको र बाँकी २३ दिन फाइटको सुटिङ भएको बताए । ‘यो मेरो करिअरको सबैभन्दा लामो क्लाइमेक्स सिन हो।’
समाचार अनुसार क्लाइमेक्समा सलमान भिलेन सुदीपका ५ सय गुण्डासँग एक्लै भिडिरहेका हुन्छन्। यो फिल्ममा १०० वटा कारलाई खेलौना जसरी हावामा उडाएको देखाइन्छ। सलमानका यसअघिका एक्सनभन्दा दबंग ३ को एक्सन अझै सशक्त रहेको बताइएको छ।
प्रभुदेवा निर्देशित दबंग ३ डिसेम्बर २० मा रिलिज हुँदैछ। फिल्ममा सलमान खान र किच्चा सुदीपका साथमा सोनाक्षी सिन्हा र सई माञ्जरेकरले पनि अभिनय गरेका छन्। सई मञ्जरेकरले यो फिल्ममार्फत बलिउडमा डेब्यू गरेकी हुन्।
सलमान खानलाई ‘डब्लु डब्लु इ’ च्याम्पियनको उपाधि (भिडियो सहित)
किन सलमानको स्टारडम कमजोर, दबंग ३ को फितलो ओपनिंग आखिर किन ?
‘दबंग ३ ‘ मा यस्तो देखिए दबंग बोई सलमान !! (भिडियो सहित )
सलमान खानको ‘दंबग ३’ चार भाषामा रिलिज हुने